Comfort zone အပြင်ဘက်သို့ ခြေတစ်လှမ်း - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ… comfort zone ဆိုတာ ကြားဖူးကြလားဟင်? Stella တို့တွေက comfort zone ကနေ ထွက်ရမှာ သိပ်ကိုကြောက်တတ်ကြတယ်။ မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်၊ မသိတာကို ထွက်ပြောရတော့မယ်ဆိုရင် ရလိုရငြား တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ ရှောင်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားကြရော။ အဆင်ပြေနေတဲ့ နေရာတစ်ခုကနေ တခြားနေရာကိုပြောင်းရင် အဆင်မပြေမှာ စိုးတဲ့စိတ်ကြောင့် တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ရပ်နေလိုက်သလိုပေါ့။
တကယ်တော့ comfort zone ဆိုတာ ကိုယ်တွေ ဦးနှောက်အတွက် လုံးဝမကောင်းပါဘူး။ ဦးနှောက်ဆိုတာမျိုးက အမြဲသွေးနေရတာလေ။ Comfort zone မှာ နေတာကြာလာတဲ့အခါ အသားကျသွားပြီး အသစ်အသစ်တွေကို လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့တာမျိုးပေါ့။ မသုံးဘဲ ထားတဲ့ ဓားက မထက်တော့သလို အသစ်အသစ်တွေ ဘာကိုမှ မသင်ယူတော့တဲ့ ဦးနှောက်က ဘာကိုမှ လက်မခံတော့တဲ့အခါ လူပါ တုံးအလာတာမျိုး ဖြစ်လာတော့မှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
Related Article >>> အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အလယ် ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ
Stella ကိုယ်တိုင်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေလောက်က comfort zone ထဲမှာ နေပျော်ခဲ့သူပါ။ ဒီတိုင်းလည်း နေလို့ဖြစ်နေတာပဲ၊ အဆင်ပြေနေသားပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ နေခဲ့တာပေါ့။ မှန်ပါတယ်… comfort zone ထဲမှာနေရတာ သိပ်သက်သာပါတယ်။ လူကော စိတ်ကော မပင်ပန်းရဘူးပေါ့။
သို့ပေမဲ့ comfort zone ထဲမှာ နေတာကြာလာလေလေ အပြင်ဘက်မှာ လေ့လာစရာတွေ သင်ယူစရာတွေ ရှိနေသေးတာကို မေ့လျော့လာလေလေပဲ။ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့လည်း ငါမှ မလုပ်တတ်တာ၊ မိဘက ကျွေးထားနိုင်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ comfort zone ထဲက မထွက်မိပြန်ဘူး။ ဒီလိုသာဆိုရင် ဘဝဟာ ဘာမှစိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိဘဲ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားသူငယ်အဖြစ် ကုန်ဆုံးသွားရပါလိမ့်မယ်။
Comfort zone ထဲက ထွက်ပါ။ မသိတဲ့အရာကို မသိတဲ့အတိုင်းမထားဘဲ သင်ယူပါ။ စွန့်စားခန်းတွေရှာပါ။ တစ်ယောက်တည်း ခရီးတွေ သွားပါ။ ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ မလုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်ကို ဝင်လုပ်ပါ။ Risk ယူဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ ဘဝက တိုတိုလေးပါ။ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝမှာ အတန်ဆုံးဖြစ်အောင် နေပါ။ အပြင်ဘက်မှာ ပျော်စရာတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေက စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေချာတဲ့အတွက် အခုပဲ comfort zone ထဲက ထွက်ပစ်လိုက်ပါ ယောင်းရေ…
ဒီတိုငျးပဲ comfort zone ထဲမှာ ဆကျနနေမှောလား?
ယောငျးတို့ရေ… comfort zone ဆိုတာ ကွားဖူးကွလားဟငျ? Stella တို့တှကေ comfort zone ကနေ ထှကျရမှာ သိပျကိုကွောကျတတျကွတယျ။ မကြှမျးကငျြတဲ့အလုပျကို လုပျရတော့မယျဆိုရငျ၊ မသိတာကို ထှကျပွောရတော့မယျဆိုရငျ ရလိုရငွား တဈနညျးနညျးနဲ့တော့ ရှောငျထှကျဖို့ ကွိုးစားကွရော။
အဆငျပွနေတေဲ့ နရောတဈခုကနေ တခွားနရောကိုပွောငျးရငျ အဆငျမပွမှော စိုးတဲ့စိတျကွောငျ့ တဈနရောတညျးမှာပဲ ရပျနလေိုကျသလိုပေါ့။တကယျတော့ comfort zone ဆိုတာ ကိုယျတှေ ဦးနှောကျအတှကျ လုံးဝမကောငျးပါဘူး။ ဦးနှောကျဆိုတာမြိုးက အမွဲသှေးနရေတာလေ။ Comfort zone မှာ နတောကွာလာတဲ့အခါ အသားကသြှားပွီး အသဈအသဈတှကေို လကျခံနိုငျစှမျးမရှိတော့တာမြိုးပေါ့။ မသုံးဘဲ ထားတဲ့ ဓားက မထကျတော့သလို အသဈအသဈတှေ ဘာကိုမှ မသငျယူတော့တဲ့ ဦးနှောကျက ဘာကိုမှ လကျမခံတော့တဲ့အခါ လူပါ တုံးအလာတာမြိုး ဖွဈလာတော့မှာပါ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article >>> အဆိုးမွငျတတျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြအလယျ ဘယျလိုရပျတညျမလဲ
Stella ကိုယျတိုငျလညျး လှနျခဲ့တဲ့နှဈတှလေောကျက comfort zone ထဲမှာ နပြေျောခဲ့သူပါ။ ဒီတိုငျးလညျး နလေို့ဖွဈနတောပဲ၊ အဆငျပွနေသေားပဲဆိုတဲ့စိတျနဲ့ နခေဲ့တာပေါ့။ မှနျပါတယျ… comfort zone ထဲမှာနရေတာ သိပျသကျသာပါတယျ။ လူကော စိတျကော မပငျပနျးရဘူးပေါ့။
သို့ပမေဲ့ comfort zone ထဲမှာ နတောကွာလာလလေေ အပွငျဘကျမှာ လလေ့ာစရာတှေ သငျယူစရာတှေ ရှိနသေေးတာကို မလြေ့ော့လာလလေပေဲ။ အလုပျလုပျမယျဆိုတော့လညျး ငါမှ မလုပျတတျတာ၊ မိဘက ကြှေးထားနိုငျတာပဲဆိုတဲ့စိတျတှနေဲ့ comfort zone ထဲက မထှကျမိပွနျဘူး။ ဒီလိုသာဆိုရငျ ဘဝဟာ ဘာမှစိတျလှုပျရှားစရာမရှိဘဲ နှားခွရောခှကျထဲက ဖားသူငယျအဖွဈ ကုနျဆုံးသှားရပါလိမျ့မယျ။
Comfort zone ထဲက ထှကျပါ။ မသိတဲ့အရာကို မသိတဲ့အတိုငျးမထားဘဲ သငျယူပါ။ စှနျ့စားခနျးတှရှောပါ။ တဈယောကျတညျး ခရီးတှေ သှားပါ။ ရောကျတဲ့နရောတိုငျးမှာ မိတျဆှဖှေဲ့ပါ။ မလုပျဖူးတဲ့အလုပျကို ဝငျလုပျပါ။ Risk ယူဖို့ မကွောကျပါနဲ့။ ဘဝက တိုတိုလေးပါ။ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝမှာ အတနျဆုံးဖွဈအောငျ နပေါ။ အပွငျဘကျမှာ ပြျောစရာတှေ၊ စိတျလှုပျရှားစရာတှကေ စောငျ့ကွိုနပေါတယျ။ မနကျဖွနျဆိုတာ မသခြောတဲ့အတှကျ အခုပဲ comfort zone ထဲက ထှကျပဈလိုကျပါ ယောငျးရေ…
Tags: comfort zone, Free, Letter from heart, Motivation, out, step
မက်ဆင်ဂျာ (messenger) မီးလေး မစိမ်းတော့အောင် ဘယ်လို ပိတ်မလဲ?